A akavimbika Tekinoroji Advisor- inofanirwa kudiwa kune yega yekutanga - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Kutanga Up Kubvunza, Kutanga kubvunza, startups, Technology Kubvunza
Kazhinji kazhinji matanho ekutanga anotadza nekuda kwezvikonzero zvikuru zviviri:
Muvambi haana kukwanisa kupa kujekesa pane zvaaida uye akavimba zvizere neunyanzvi hwekuvandudza
Mugadziri uyo akavimbisa uye akatadza kubvunza chaiyo tekinoroji mibvunzo zvisati zvaitika
Kuve nehunyanzvi chipangamazano kunogona kudzora zvakanyanya mukana wekuti izvi zvizoitika. Kutanga vatangi kazhinji vanoregeredza basa remudzidzisi wezvehunyanzvi, asi ndicho chinhu chakanyanya kukosha pakubudirira kwetekinoroji.
Sei? Heano zvimwe zvikonzero zvaunofanira kufunga:
Iwe une yako tekinoroji zvido zvakajeka?
Sekutanga muvambi, iwe unofanirwa kuve wakajeka zvakanyanya nezve izvo iwe zvaunoda kubva kuneako chigadzirwa chigadzirwa. Bvisa zvinodiwa zvinongedzo zvinoita kuti kuitisa kuve nyore kwazvo pasina chero kupotsa. Izvo zvakakosha kuti pfungwa yako uye kuitiswa kwayo kufambe munzira imwechete.
Wehunyanzvi chipangamazano ane ziso pane zvakadzama uye anogona kuve nerubatsiro rukuru mukutsanangudza kwako kwese chigadzirwa zvinodiwa. Nenzira iyi timu yako yekutsvaga kunze ichaziviswa nezvakajeka uye zvakadzama zvigadzirwa zvinodiwa kudzikisa mikana yekusajeka kupi.
Wakatosarudza chaiyo tekinoroji stack?
Kunyangwe zvisingatarisirwe kubva kwauri kuve nyanzvi yehunyanzvi asi zvakanyatso kudikanwa kuti iwe uve nehunyanzvi chipangamazano muchikwata chako. Wehunyanzvi chipangamazano anogona kupa yakanakisa tekinoroji zvitutira zvechigadzirwa chako. Ivo vanogona kuve nechokwadi chekuti iwe unosarudza chaiyo maratidziro ayo anotyisa uye achiwedzeredzwa kune chako chigadzirwa. Kune akatiwandei echitatu mapato bato iwe aungade kushandisa muchigadzirwa chako. Mupi wezano akakodzera anogona kupa maturusi akanakisa uye kuona mashandisiro awo akakodzera.
Iwe waita yakanakisa tekinoroji kudyara?
Nhasi, varidzi vekutanga vanobvumidza kushandisa zvakanakisa mune akanakisa matekinoroji zviwanikwa uye vakagadzirira kuita mari hombe. Mupi wezve tekinoroji wezano anogona kuve wako akanakisa inivhesitimendi chipangamazano uye anogona kukubatsira kuisa mari muchikwata chakakodzera chekuvandudza, zvigadzirwa zvehunyanzvi, uye nzira kwayo yekuvandudza.
Kuvanzika kwako kwakachengeteka here?
Pfungwa yako yechigadzirwa yakafanana nemwana wako uye kuigovana neako ekuvandudza kunosanganisira njodzi yakawanda Iwe unokwanisa kuwana kune ese mapassword uye nekodhi kodhi? Iwe une masimba akazara pane iyo yekutambira, duraini, nezvimwe? Ibasa rako kuona kuti hausi kusiya mikova yako isina kukiyiwa. Unyanzvi hweTekinoroji uchaona kuti une masimba pazvinhu zvako zvese nekuisa zvakavanzika zvibvumirano uye mazwi ekuvandudza pamwe nechimwe timu.
Une zvirongwa zvekuenderera mberi here?
Kana iwe uri kufunga kwenguva refu neMVP yako, iwe unofanirwa zvirokwazvo kusarudza kune nyanzvi tekinoroji chipangamazano. Achagadzira hurongwa hwekuvandudza kuti agadzirise chero shanduko mune ramangwana uye zvinowedzerwa uye achanetsekana pakuita kuti sisitimu iwedzere kukurumidza kubva pakutanga. Saka iwe unogona kuramba uchiwedzera iwo mavhezheni pasina kana kunetsekana sezvo iwe waive nekutangisa chaiko.
Saka, chii zvese chiri chipangamazano chipangamazano anoona nezve:
Kutsanangura chakakodzera chigadzirwa chinodiwa
Kusarudza rakanakisa timu rekuvandudza
Kugadzira akanakisa esarudzo yehunyanzvi
Kuona kuti kusimudzira kuri scalable
Maumbirwo ekuvandudza zvibvumirano nemazvo
Ronga zvakapfuura yekutanga MVP.
Kupa zano nezveTechnical Direction
Muchidimbu, chipangamazano chipangamazano munhu anogona kutsanangura zvichagadziriswa, kuti ichavakwa sei, uye kuve nechokwadi chekuti pakupedzisira unowana zvinhu zvakanaka panguva yakakodzera.
Kutsvaga anovimbika tekinoroji chipangamazano?
At NewGenApps, takashanda sevanopa mazano ehunyanzvi kune vakawanda startups, mamwe acho akaenderera mberi nekuwana mari hombe yemabhizimusi nemaMVP avo. Tinonzwisisa zvinodiwa uye matambudziko yekutanga uye isu tinoshanda padhuze sevadyidzani kutsanangura yavo yakazara chigadzirwa zano. Unoda technical technical paMVP yako?